Saturday July 25, 2020 - 07:33:56 in Wararka by
Xoogag jihaadi ah oo la rumeysanyahay in ay katirsanyihiin Al Qaacidda ayaa qaaday weeraro khasaara lagu gaarsiiyay ciidamada gummeysiga Faransiiska oo ee duullaanka ku jooga dalka Maali.
Warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada looga arrimiyo dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in weerar hor leh oo ka dhacay galbeedka qaaradda Afrika ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar Faransiis ah.
Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in qarax miino oo gelinkii dambe ee maalintii khamiista ka dhacay duleedka magaalada Gaawa uu sababay dhimashada ugu yaraan hal askari iyo dhaawaca 2 kale.
Dowladda Faransiiska waxay sheegtay in miino ku qaraxday gaari gaashaaman ay ku dhaawacmeen 2 askari islamarkaana uu ku dhintay askari Faransiis ah, qaraxa oo ka dhacay meel 150 Km ujirta magaalada Gaawa ayaa geystay burbur xooggan oo gaaray gaariga laweeraray.
Qasriga looga arrimiyo dalka Faransiiska aya warsaxaafadeedka uu soo saaray walaac uga muujinayay weerarada uga imaanaya jamaacada JNIM oo ah jamaaco hoos tagta Al Qaacidda islamarkaana ka howlgasha illaa sedax wadan oo dhaca mandiqadda Saaxilka.
Khasaarahan gaaray ciidamada Faransiiska ee ku duulay dalka Maali ayaa imaanaya xilli Ururka Midowga Yurub uu dhawaan iclaamiyay howlgal cusub oo qaabilka ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada waxaana howlgalkan fulinaya 100 askari oo ka socda Maali iyo Istooniya.